टेलिकममा कामिनी आएदेखि ‘डरलाग्दो भ्रष्टाचार’, नियमन निकाय किन मौन ? – Complete Nepali News Portal
टेलिकममा कामिनी आएदेखि ‘डरलाग्दो भ्रष्टाचार’, नियमन निकाय किन मौन ?
April 5, 2017	8,461 Views
काठमाडौं, २१ चैत । नेपाल टेलिकममा भ्रष्टाचारले हद नाघेपनि सम्बन्धित नियमन निकायहरु मौन रहँदा ‘चोरलाई चौतारी साधुलाई सुली’ भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ बनेको छ । आधा दर्जन जत्ति उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा संस्थाका हितमा कार्यरत कर्मचारीहरुले गरेपनि अझै छानविन गरिएको छैन ।
नेपाल टेलिकमका माफियाहरु कति बलिया छन् भन्ने उदाहरणको रुपमा अहिलेसम्म सामान्य कार्वाही पनि नहुनुलाई लिन सकिन्छ । प्रवन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई केबल ‘एसम्यान’का रुपमा प्रयोग गरेर पूर्व नायव प्रवन्ध निर्देशकहरुले ठेक्का लिएका कारण अहिले यो अवस्था आएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने शक्तिशाली माफियाहरुका कारण राजभण्डारी पनि मस्त निन्द्रामा छन् । उता अख्तियारका एक नम्बर महााखाका कुमार राज न्यौपानेले कार्वाहीको प्रक्रियामा रहेको बताएका छन् । तर एसएमएससीको फाइल अख्तियारबाट ल्याउनका लागि महाशाखाका प्रमुख भुपाल बराल र कुमारराज न्यौपानेलाई ५० लाख रुपैया घुस ख्वाउनुपर्दछ भन्दै प्रदिप ठाकुरले सप्लायरसँग पैसा माग गरेको एक जना कर्मचारीले बताए ।
प्रवन्ध निर्देशक राजभण्डारी युरोपका लागि भिषा लगाउन जाँदा दिल्ली जाँदा सप्लायरहरुसँग कुरा गर्न नमिल्ने भन्दै दुई सय डलरमा होटल बुक गरी नबसीकनै पनि संस्थाले रकम ब्यहोर्न बाद्य भयो । तर पनि संस्थाका विभिन्न संघठनहरुका तिव्र असन्तोषका बावजुद संस्थामा टावर थप गराएर गुणस्तरमा वृद्धि गर्ने काममा कहिल्यैपनि ध्यान दिन सकिरहेकी छैनन् । नत उनले हालसम्म संस्थाका हितमा कुनै नीतिगत निर्णय नै गराउन सकेकी छन् ।
नेपाल टेलिकममा भएका अनगिन्ती भ्रष्टाचारहरुका विरुद्धमा २०७३ आश्विन १० गते दर्ता नम्बर ७२६०, कार्तिक २३ गते दर्ता नम्बर ९५०१, मंसिर १२ गते दर्ता नम्बर १०३५६ र पौष ९ गते दर्ता नम्बर ११५४७, फाल्गुन ८ गते १५१०७ लगायत बारम्बार उजुरी गरिएपनि अख्तियारका कर्मचारीहरु पनि मिलाउन सक्छु भन्दै प्रवन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारी निकटका कर्मचारीहरु प्रदिप ठाकुर, लक्ष्मण अधिकारी, नरेन्द्र महर्जनहरु लाइन मिलाउनका लागिपरेका छन् ।
भरखरै मेनेजरहरुको बढुवामा पनि प्रवन्ध निर्देशक राजभण्डारीले खुलेयाम घुस मागेकी छन् । उनलाई दाम बुझाउने र नातापाताहरु मात्रै बढुवा गरिएका एक जना कर्मचारीले नाम नबताउने शर्तमा डायरी एक्सप्रेससँग बताए । आफुले खर्च गरेको सात करोड फोरजी सञ्चालनबाटै उठाउन सकेको भन्दै उनी आरमसँग बसिरहेकी छन् । टेलिकमको प्रवन्ध निर्देशक बन्नका लागि सुविधा सहितको मापदण्ड अनुसार पुग्नुपर्ने कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा एकदमै कमजोर राजभण्डारीका पक्षमा अहिले अग्रिम रकम लिएर नियुक्ति दिलाउने बाहेक संस्थाका हित चाहनेहरु कोहि पनि लाग्न सकेका छैनन् । उनको कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा सुचांक ६ पनि आउन सकेको छैन । जबकी संचालक समितिले नै ९.७५ ल्याउनुपर्ने न्यूनतम मापदण्ड तोकेको थियो । अन्यथा किन मासिक एक लाख पचास हजार मात्रै तलब नेपालकी राष्ट्रपति विद्या देबी भण्डारीको हुँदा टेलिकममा प्रवन्ध निर्देशकको तलव दुई लाख राखियो ? कर्मचारीहरुले प्रश्न गरेका छन् ।
कर्मचारी युनियनहरु संस्थालाई बर्वाद नै गराउन लागेका कारण आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने निचोढमा पुगिसकेका छन् । त्यसका लागि राजभण्डारीले संस्था सञ्चालनका लागि एकमुष्ट रकम दिलाउने ललिपप पनि देखाउने गरेकी छन् । तथापि संस्था नै डुबाएर त्यस्तो ललिपपमा पछि नलाग्ने संस्थाका एक जना नेताले डायरी एक्सप्रेस साप्ताहिकसँग भने ।
पछिल्लो अवस्थामा फोरजीका जागि खर्च गरिएको भनिएको ५७ करोड रुपैया सबै झ्वाम पारेर का कारण मन्त्री सुरेन्द्र कार्की समेत रुष्ट बनेका छन् । मन्त्रीलाई स्पष्ट रुपमा नबताएको भन्दै हप्काई खाएको एक जना कर्मचारीले बताए ।
अहिले विदेश घुम्नका निमित्त श्रीमान्का लागि समेत सप्लायरहरुले रकम खर्च गरिदिने भएपछि प्रवन्ध निर्देशक राजभण्डारीको दिन दुगुना रात चौगुना बनेको छ । तर संस्थाको हितमा काम काम गर्न नसक्दा र पैसा नलिइ कामै नहुने हुँदा समाचार प्रकाशन भएपछि रातो दिन निदाएकी छैनन् ।
डायरी एक्सप्रेस साप्ताहिकमा समाचार छ । (दैनिक नेपाल)